१२ वर्षे बालिकाले किन हालिन् टिकटकविरुद्ध मुद्दा, अब के हुन्छ ? : Himali Khabar
१२ वर्षे बालिकाले किन हालिन् टिकटकविरुद्ध मुद्दा, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं, १८ पुस । बेलायतमा एक १२ वर्षीया बालिकाले भिडियो शेयरिङ एप टिकटकविरुद्ध मुद्दा हालेकी छन् । नाम गोप्य राखिएकी ती बालिकाले टिकटकमाथि बालबालिकाका डाटाहरु अवैधानिकरुपमा प्रयोग गरिरहेको जिकिर गरेकी छिन् । ती बालिकालाई कानुनी लडाइँका लागि बेलायतको बालबालिका आयोगकी आयुक्त आन्ने लंगफिल्डले सहयोग गरिरहेको बताइएको छ ।
टिकटकले बेलायत तथा युरोपेली युनियनको डाटा सुरक्षण कानुनको उल्लंघन गरिरहेको दाबी उनको छ । उता टिकटकले भने बालबालिकाको संरक्षणका लागि कम्पनीले दह्रिलो नीति अख्तियार गरिरहेको र १३ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई टिकटकमा खाता खोल्न बन्देज लगाइएको जनाएको छ । उता बालबालिका आयुक्त लंगफिल्डले भने टिकटकविरुद्ध १२ वर्षीया बालिकाले दायर गरेको मुद्दाले १६ वर्षमुनिका विश्वभरका टिकटक प्रयोगकर्ताहरुलाई टिकटकमा सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने दाबी गरेकी छिन् ।
उनका अनुसार टिकटकले आफ्नो भिडियो रेकोमेन्डेसन अल्गोरिदममा प्रयोग गर्न, दर्शनको ध्यान आकृष्ट गर्न तथा विज्ञापनबाट आय बढाउनका लागि बालबालिकाका डाटाहरु संकलन तथा प्रशोधन गर्ने गरेको छ । एक भिडियो लिंकमार्फत लण्डन हाइकोर्टलाई अनुरोध गर्दै उनले बालबालिकाका डाटाहरु डिलिट गर्नका लागि अदालतले टिकटकलाई आदेश दिएर नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरेकी छिन् ।
स्मरण रहोस् बालबालिकाका डाटाहरु संकलन तथा दुरुपयोग गरेको आरोपमा सन् २०१९ मा अमेरिकाको संघीय वाणिज्य आयोगले टिकटकमाथि ५७ लाख डलर जरिमाना गरेको थियो । गत वर्ष सन् २०२० मा दक्षिण कोरियाले पनि यस्तै मुद्दामा टिकटकमाथि जरिमाना गरेको छ । बीबीसी
विदेशी बालिकालाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका…
एक वर्षमा १६ अर्ब राजस्व छलि र विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्धा